SIDA LOO DOORTO KORRIIN KORONTO OO KORONTO: TALOOYIN IYO TABAHA - MISHIINADA GAARKA AH
Baahida loo qabo aalad waddanka ka mid ah
Geediga leh cawska cagaaran iyo cawska si fiican u muuqda waxay u egtahay mid aad u fiican oo ka badan cawska cawska.
Laakiin si ay u ilaaliyaan in sida noocan oo kale ah waa mid aad u adag, sababtoo ah cawska ayaa u socda si degdeg ah, gaar ahaan xilliyada roobaadka.
Ma taqaanaa? Cawska cawska ayaa lagu abuuray 1830 by Englishman E. B. Bading.
Ma fududa in la sameeyo iyada oo aan lahayn qalab gaar ah: geedi socodku wuxuu qaadan doonaa qaybta libaax ee wakhtiga la isticmaali karo beerista dalag caafimaad leh ama madadaalo dibadeed. Taasi waa sababta arsenal ee milkiilaha wax ka mid ah qulqulka, cawska cawska noqonayaa mid raaxo ah, laakiin daruuri ah.
Gaadiidka ama gaasta: Faa'iidooyinka iyo iwm
By nooca tamarta wada cunaan cawska cawska yihiin koronto iyo gaas.
Mid kastaa wuxuu leeyahay faa'iido iyo faa'iido daro. Si aad u aragto nooca cawska cawska ku wanaagsan - shidaalka ama korontada, tixgeli faa'iidooyinka ugu weyn iyo qasaaraha mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Maneuverability Dhibaatada ugu weyn ee moodooyinka korantadu waa xoriyadda dhaqdhaqaaqa inta lagu jiro shaqada: tani waxay sabab u tahay jiritaanka silig. Marka horeDhererka xadhiggu mar walba uma ogalaan inaad gaarto dhammaan qaybaha goobta, laakiin tan waxaa lagu xallin karaa xargaha dheeraadka ah. Marka labaad, waxaa had iyo jeer suurtogal ah in siligu ay hoos u dhacdo mindiyaha, waxaad si joogto ah u baahan tahay inaad kormeerto tan, hagaajinta inta lagu jiro hawlgalka.
Waa muhiim! Xiro kabo caag ah si aad uga hortagto shoogga korontada.
Kaydinta Dabcan, ka hor intaadan iibsan qalab waxaad u baahan tahay inaad ka fekerto meesha ay ku kaydsan tahay. Sida qalabka beerta, xilliga jiilaalka wuxuu caadi ahaan ku hayaa barn, garaash ama xitaa gaadiid guri. Oo haddii dhismahaagu aanu lahayn meel ku filan, waxaa fiican in la siiyo doorbididda cawska korontada: waxay u haboontahay xitaa balakoonka. Marka la eego cabbirka iyo miisaanka, waxay ku guuleysataa baasiin. Waxaa intaa dheer, dambe in badanaa laguma talinayo in lagu kaydiyo guri dabaq ah sababtoo ah joogitaanka ur xooggan oo shidaal ah.
Farxad. Dhirta cawska ee korontada ayaa marar badan ka jaban batroolka. Tani waxay sabab u tahay kakanaanta naqshadeynta makiinadda gaaska. Intaa waxaa dheer, saliida iyo saliida waxay ka qaalisan yihiin korantada.
Adeeg. Xaqiiqo-dhaqaaleedka ugu fiican ee ku saabsan arrintan - koronto. Moodooyinka noocan oo kale ah ayaa ah kuwo hooseeya si ay u joogteeyaan - waxay u baahan yihiin oo kaliya inay xiraan intaanay shaqayn. Intii aad gaasku ku jirtay, marka hore waxaad u baahan tahay inaad buuxiso shidaalka iyo saliidda, la soco heerarka cabitaanadan, mararka qaarkood si aad u ilaaliso mishiinka (beddel ama nadiifi fiilada iyo shukumaanka).
Waa muhiim! Iyada oo aan jirin duruufaha waa in bacrimiya shidaal laga dhigo ama la gooyaa: saliiddu waxay daadin doontaa mishiinka waxayna keeneysaa hoos.
Dumarka Mashiinka korontada waa aamusnaan iyo barbaro la'aan. Sidaa daraadeed, marka laga reebo gaasta buuqa ah, cutubyada noocan oo kale ah waxay shaqeyn karaan wakhti kasta oo ka mid ah maalintaas iyada oo aan dhibin deriska.
Qalabka jirka. Noocyada shidaalka waxaa badanaa lagu sameeyaa kiisaska birta. Waxay ka xoog badan yihiin koronto, qolofka kuwaas oo ah caag ah. Si kastaba ha noqotee, sawirkani wuxuu noqon karaa mid laga jaray, sababtoo ah birtu waa mid culus oo la aqbali karo si loo yareeyo.
Saaxiibtinimada deegaanka. Gawaarida qiiqa, sida ka soo baxa mashiinka gaasku, waxay nadiifiyaan bey'adda. Sidaa darteed, taageerayaasha Eco-teknoolajiyadu waxay doorbidi doonaan miro-dhaliyayaasha korantada.
Sidee loo doortaa xirfad-yaqaanimo ee su'aalaha, xulashada shuruudaha
Marka la eego shuruudaha kor ku xusan, qofku wuxuu arki karaa faa'iido cad oo ah moodooyinka ka shaqeeya korantada. Hadda waxaan diiradda saari doonaa sida loo doorto qashinka korontada.
Is-gedisan, aan la foorarsanayn
Ma aha miro-firfircooni, kuwaas oo ay tahay in gacanta lagu duubo, miisaankoodu yar yahay, sababtoo ah way sahlan yihiin inay qaadaan oo kaydiyaan. Laakiin isla mar ahaantaana, waxay u baahan yihiin dadaal badan oo jir ahaaneed haddii ay jiraan wax qalad ah, xargo ama qoob ka ciyaara goobta. Isku-dallacsiin Gaadiidku keligiis ayuu u guuraa, qofku wuxuu u jeedaa jihada. Awoodda tamarta waxaa loogu talagalay oo kaliya shaqada mindida, laakiin sidoo kale dhaqdhaqaaqa lugaha. Cows-ka noocan oo kale ah ayaa leh miisaan aad u qumman, waxayna ku haboon tahay shaqooyinka meelaha waaweyn.
Awoodda tamarta, oo lagu qalabeeyey cawska cawska, badanaaba waxay u dhaxeysaa 0.8 ilaa 3 kW. Awoodda badan, waxqabadka badan.
Si kastaba ha noqotee, waa inaadan indho la'aan u siinin qaababka ugu xoogan. Haddii cawskaagu uu si fiican u jajaban yahay, waxaad jaraysaa cawska waqtigaa, cawska cawska leh ee aad u xoogan ayaa noqon doona mid aad u sarreeya. Waxay u baahnaan doonaan inaysan isticmaalin qadar fara badan oo koronto ah. Laakiin makiinadaha hooseeya ee xoogga leh ayaa aad u sarreeya, marka marka la doorto, raadso waqtiga shaqada ee joogtada ah baasaboorka wax soo saarka.
Caadi ahaan caanaha korontada loogu talagalay dachas caadiga ah waxaa loogu talagalay inay shaqeeyaan illaa 30 daqiiqo - waqtigan ayaa ku filan in cawska la gooyo.
Cawska cawska ayaa sidoo kale ciriiri kara cawska.
Nooca cawska cawska (jarida dhererka iyo dhererka)
Wareegta qashinka ee cawska waxay ku xiran tahay xajmiga mindiyaha lagu rakibay ubucda. Moodooyinka qaaliga ah oo aan qaali ahayn waxay leeyihiin mindhicir ah oo ku saabsan 30 cm, oo leh qaabab aad u sarreeya waxay gaari kartaa 46 cm Tilmaamahan wuxuu saameynayaa waxqabadka. Sidaa darteed, waxaad ka shaqeyn kartaa aagga oo dhan 15 baaskiil, adiguna xitaa 9aad. Halkaan waxaad ka dooran kartaa cawska korontada ee korontada ku shaqeeya marka la eego kharashka shaqada iyo wakhtiga lagu qaato siinta cawska.
Iyada oo ay caawimaad ka tahay cawska cawska ah, dhererka cawska cagaarka ah ayaa la gaari karaa. Isku hagaajinta waxaa lagu fuliyaa seddex siyood.:
permutation of wheel kasta;
dib-u-dhiska wadada muraayadda;
adigoo isticmaalaya qalab ama badhan.
Tilmaamintani ma aha mid aad muhiim u ah, sida beeralayda sida caadiga ah waxay isticmaalaan hal heer keliya.
Laakiin haddii aad doonaysid inaad ku qalabeysid cawska farshaxankaaga ku yaal goobtaada, ka dibna waxaad doorbideysaa moodeelada leh habka riix-badhanka ama hagaajinta.
Ku dhowaad dhammaan noocyada gawaarida leh waxay ku qalabaysan yihiin cawska cawska - weel si loogu uruuriyo cawska. Waxay yihiin jilicsan oo adag.
Cunnooyinka jilicsan ayaa badanaa ku badan mugga, laakiin faa iidooyinkooda ayaa ah inay si deg deg ah uga noqdaan cawska, waana in la mayraa wakhti ka dib, waana ay yar yihiin. Weelasha caagga ah waa kuwo adag, laakiin way adag tahay in la ogaado heerka buuxda. Sanduuqa aruurinta mar walba waa la burburin karaa, makaanna loo isticmaali karaa iyada oo aan la isticmaalin.
Shuruudaha looga hadlo
Qeybta hoose waa qaybaha shaqada ee cawska cawska - mindiyaha. Waxaa laga samayn karaa (korodh):
Noocyada leh qashinka aluminimadu maaha mid u nugul dusha korontada - sidaa daraadeed, way sii raagayaan. Qaadida cawska ee ceymiska waxaa lagu qalabeeyaa balaastig caag ah, laakiin mararka qaarkood waxaa lagula talinayaa inay siiyaan doorbidid sababtoo ah mashiinka korontadu badanaa wuu ku guuldareystaa ka hor inta aanay qaybta caaggu dhaawacmin.
Waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan sida loo hagaajinayo cawskaada.
Tilmaamo dheeraad ah iyo shaqooyin
Marka lagu daro sifooyinka asaasiga ah marka aad dooranaysid koronto-korantada korontada waa in ay fiiro gaar ah u yeelato tiro shaqooyin dheeraad ah iyo sifooyin.
Tusaale ahaan, moodooyinka qaarkood waxaa lagu qalabeeyaa shaqeyn boodh ah, i.e., cawska cawska. Mulch-ku keentay waxaa loo isticmaalaa in lagu quudiyo cawska.
Waa muhiim! Wixii mulchin tayo leh, ku xoqi oo kaliya jilicsan, cawska qalalan. Cawska qoyan wuxuu u nugul yahay inuu isku xoqo, iyo mulchka noocan oo kale ayaa horjoogsan doona koritaanka bilaashka ah ee cawska.
Waxa kale oo jira muuqaal ay ka mid yihiin sii deynta cawska. Waxay noqon doontaa mid faa'iido leh markaad jarayso cawska. Cawska cawska ayaa ku kala duwan dhexroorka ballaaran iyo taayirrada. Haddii aad tahay mulkiilaha gargaarka deg-degga ah ee aan habboonayn, waxaad doorbideysaa qaababka leh muraayado waaweyn.
Moodooyinka ugu caansan ee cawska korontada korontada ee beerta
Sida laga soo xigtay milkiilayaasha, qiimeyn gaar ah oo ka mid ah modelada ugu caansan ayaa la sameeyay.
Dhaqanka ugu fiican ayaa la aqoonsaday koronto qaabka STIGA Combi 48 ES. Tani waa 1.8-kW oo wax lagu kiciyay. Waxay leedahay meelo bir ah, birta wax lagu duubo, gacanta lagu hagaajin karo, maneuverability. Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah:
5 heerarka barashada;
guryaha birta ah;
ururinta 60 litir.
Khasaaradu waa waqti dheer ee dhiirigelinta mindi (ilaa 30-50 s).
Ma taqaanaa? Nidaamka sharciyadu wuxuu ahaa qalabka wax lagu duubo, taas oo E. Bading ku aragtay warshadda dharka.
Qaab kale oo caan ah waa Makita ELM3711. Waxay miisaankeedu yahay 14 kg oo kaliya iyada oo ay ugu wacan tahay kiis caag ah. Qalabka jilicsan oo leh 35 l, jilbaha la isku hagaajin karo, oo ku habboon goobaha waaweyn.
heerka hoos u dhaca maqalka;
qiimaha la awoodi karo.
tayad hoose oo tayo leh;
way adag tahay in lagu xaaqo cawska agagaarka caqabadaha.
Qaabka ugu dambeeya ee aan jeclahay in aan dego waa Bosch Rotak 43. Tani waa cawska aan-dhaqdhaqaaqa lahayn oo leh 1.8 kiilo koronto, miisaankeedu waa 12.4 kg, oo leh 50 litir.
fursad ay ku xoqaan cawska si ay u gaaraan meelo iyo goobaha gargaarka.
wax shaqo ah mulch
dayactir qaali ah.
Waxaan rajeyneynaa in maqaalkeenu kaa caawin doono inaad go'aansato oo aad dooratid caanaha ugu fiican ee cawskaaga.